Ihe eji eletrọniki na ihe eji eme ihe na otu esi emegharị ha - Ikkaro
Igwe eletriki na igwe na-emegharị ite
Anyị na-amalite ngalaba ọhụrụ maka imeghari nke ngwa-ngwa niile na-enweghị isi anyị nwere n’ụlọ anyị na anyị ga-atụfu, ma ọ bụ ngwa ndị enyi maọbụ ezinaụlọ anyị na-enye anyị.
M pụtara floppy draịva, nwa ụmụaka ma ọ bụ ndị China. Draya, thermos, telivishọn, routers, mobiles na smartphones, wdg, wdg Anyị amaghị ego mkpofu anyị na-ewepụta, nke ihe niile anyị lara n'iyi ...
Anyị chọrọ ịza ajụjụ ahụkarị.
Kedu ihe m ga - eji ...
Anyị ga-anwa ịwepụ ha, chọta akụkụ dị iche iche wee hụ ndị anyị nwere ike iji ma ọ bụ jigharịa na ihe.
Anyị ga-anwa ịme nkewa ahụ na akụkụ igwe na kọmputa.
Obi dị anyị ụtọ ịnata enyemaka ma ọ bụ ndụmọdụ.
Nke a bụ otu akụkụ kachasị amasị m, ejirila m ndụ m na-ewepụ ihe dị iche iche ma na-anwa ịnye ya nke abụọ, nke atọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ekwenyere m n'ezie na ọ dị mkpa ọ bụghị naanị iji rụkwaa kamakwa iji jigharịa ma megharịa. Ihe anyị kwesiri ịmara nke a ga-akụnye na ndị na-eto eto n'ụlọ akwụkwọ, n'ime ezinụlọ, site na nwata. Maka ụwa ka mma.
Ighapu Ikea Lottorp ma ọ bụ Klockis na-ekiri
A na-akpọ ya Löttorp ma ọ bụ Klockis, echere m na ha agbanweela aha na bụ a dị mfe elekere, oti mkpu, ngụ oge na temometa nke ọ na - ere na Ikea maka € 4 ma ọ bụ € 5. A 4 na otu. Ọ dị mma ịnwe ya na kichin, ime ụlọ, wdg. Ihe dị mma banyere elekere a bụ iji ya, ọ dị oke nfe ịgbanwe n'etiti usoro ọrụ ya, naanị ị ga-agagharị elekere ahụ. Ya mere, ka ị na-atụgharị, nha dịgasị iche ga-egosi na ngosipụta ahụ. Daughtersmụ m nwanyị na-ara ara mgbe ha jidere ya. Na nke ọ bụla, ọ beeps na ìhè nke a na agba dị iche na-abịa na :)
Anaghị m azụtakarị ihe iji tụfuo ha, ana m erite uru mgbe niile na ihe na-aga ahịhịa ma ọ bụ imegharị ya, ma na nke ugbu a, enweghị m ike iguzogide. M jidere ya n’aka, amalitere m ịmatakwu ihe. M ga-enwe ike iji ngosipụta na Arduino? Kedu ihe mmetụta ha ga-eji tụọ ọnọdụ okpomọkụ ma chọpụta ngbanwe ọnọdụ ya? Enwere mbanye anataghị ikike na-adọrọ mmasị nke enwere ike ịme nche. Ma karịa ihe niile, ihe kacha masị m bụ ihe a na-anụ bụ mkpọtụ mkpọtụ a na-anụ mgbe ị na-emegharị ya. Gini mere ihe ji adi n'ime? Ma ọ bụghị na nche, kama na ihe niile.
Mee N'onwe Gị oru ngo egweri ihe ọkpụkpọ CD / DVD
Taa, ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'ụlọ ndị CD ọkpụkpọ ochie ma ọ bụ DVD anyị anaghịzi eji ma ọ dị oke mma ngwaike ngwaike n'ihi na anyị Mee N'onwe Gị oru ngo.
Aga m ebukọta ihe ọkpụkpọ CD iji hụ iberibe anyị nwere ike iji mee ihe m na-ahapụ ndepụta nke ọrụ na-adọrọ mmasị (ihe nkuzi) enwere ike ịme na mpempe akwụkwọ ọ bụla. Njikọ ndị ahụ bụ ọrụ na Bekee, mana nke nta nke nta m ga-anwa ịmegharị ha ma hapụ akwụkwọ niile na Spanish.
Ihe nlereanya a emeela ochie. Echere m na ọ ka na-arụ ọrụ, mana ebe ọ bụ na enwere m 3 ma ọ bụ 4 ọzọ, a chụọla ya n'isiokwu :)
Egweri batrị eji na ogwe igwe
Ndị nyocha si MIT echepụtawo usoro iji egweri batrị ụgbọ ala eji ma jiri ha mepụta ogwe igwe.
Ruo ugbu a, 90% nke batrị ụgbọ ala na-eduga na United States na-emegharịgharị iji mekwuo batrị, mana oge ga-abịa mgbe ụdị batrị ndị ọzọ ga-anọchi teknụzụ a ma ọ bụrụ na ọ gaghịzi ekwe omume / nwee mmasị imegharị ha nwere ike ịghọ ihe siri ike nsogbu gburugburu ebe obibi.
Yabụ MIT achọtala ezigbo ngwọta. Site na usoro dị mfe nke na-enye ha ohere ighazigharị ha iji mee ka ha bụrụ ogwe igwe. Ihe dị mma bụ na efere ndị a mgbe ha mebiri enwere ike imeghari n'ime ogwe ohuru.
Ọzọkwa, uru ya anaghị akwụsị ebe a. usoro a enweghi mmetuta karie nke eji eji emeputa ihe ugbua site na ore. Yabụ na ọ dịka ihe niile zuru oke. Ọbụna arụmọrụ nke efere ọhụrụ ndị a dị gburugburu 19% ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu kachasị enweta na teknụzụ ndị ọzọ. Ugbu a naanị ihe na-efu bụ ụlọ ọrụ raara onwe ha nye maka ire ya.
Disassembling igwe igwe
Enwetala m a ochie dynamo nke ahụ anaghị arụ ọrụ. A dinamo bụ a Igwe ọkụ eletrik iji gbanwee ike igwe ka ọ dị ugbu a.
Jiri iko iko yogọt mee ihe
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na-eri yogọt na tubị iko, n’ezie ị debere iko ndị ahụ iji mee ihe na-enweghị atụ na n’ikpeazụ ha na-akwụsị n’ime kaboodu ma ọ bụ nke ka njọ, na ahịhịa.
Otu esi emeghari ma na-emegharị gel silica
El Gel silica A na-eji ya dị ka onye na-ehicha ihe iji chịkwaa iru mmiri nke ogige. Nnukwu porosity ya na-eme ka ọ bụrụ ezigbo mmiri mmiri. Dị ka ị ga-ahụ ọ bụ ezie na e nwere okwu nke Gel silica, nke a abụghị gel, mana ihe siri ike.
A na-ahụ akpa ndị a mgbe anyị zụtara akpụkpọ ụkwụ, akwa, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Na otutu oge anyi amaghi ihe anyi ga eme ha ma ha na emecha ahihia.
Silica gel nwere cobalt chloride, nke, mgbe ọ na-emeghachi omume na mmiri, si na-acha anụnụ anụnụ gaa pink. Dustjá a rụpụtara mgbe ị na-ejikwa ngwaahịa a nwere ike ịkpata silicosis, yabụ egbula ya ma ọ bụ ihe ndị yiri ya.
Egweri Styrofoam ma ọ bụ Styrofoam
El ụdị polystyrene (XPS), nke a na-ere ahịa n’aha nke Stryrofoam, ọ mejupụtara 95% polystyrene na 5% gas nke tọrọ n'ime usoro extrusion.
Chemical mejupụtara nke ụdị polystyrene yiri nke nke gbasaa polystyrene. Ma usoro ịkpụzi Styrofoam, na-enye ya nnukwu mgbochi okpomọkụ ma mee ka ọ dịkwuo mma ịnabata mmiri.
Ọ bụrụ na ị maghị ihe polystyrene bụ, ọ bụ okwuchi, na-acha ọcha nke ndụ niile, na styrofoam, bụ nke ị na-ahụ mgbe ụfọdụ siri ike karị. Ọ bụ ụfụfụ ka anyị na-ahụ ka ha na-eji mkpuchi ihe na ụlọ
Ugboro mmiri mmiri igwe
Manuel sitere na http://comiendo.wordpress.com/category/eco-chismes/ ezitere anyị isiokwu a ka anyị jigharịa mmiri na igwe ịsa ahụ.
Ebe ọ bụ na anyị ji ecoball ịsa, anyị na-eche esi eji mmiri mee ihe na igwe ịsa ahụ ịgba ubi ahụ mmiri Iji eziokwu ahụ bụ na ọ na-apụta na-enweghị kemịkal. Ebe ọ bụ na igwe ịsa ahụ dị n'ime ụgbọala, enwere ohere maka ule na ịwụnye usoro nwere ntụkwasị obi na nke kwụ ọtọ. Ihe ị ga - eme bụ ịgbanye igodo na - adabere na iji ncha ma ọ bụ na ị naghị ehicha ya. Ọfọn ọ na-aga mepụtara ya, ọfụma. N'oge oyi anyị ga-enwe ọtụtụ mmiri ma n'oge ọkọchị, ihe niile a na-emepụta agaghị ezu.
Mee chess na iberibe iberibe
Na-amasị gị chess? Na ụdị ndị a ị ga - enweta mmụọ nsọ mepụta chess nke gi na ihe eji emegharia,
Chess na bolts na akụ
tumadi na nkpuru osisi, isi iyi, ihe nchacha na kposara.
Ke idaha enye emi, mbak chess ejirila akụkụ ụgbọ ala.
Otu mgbịrịgba igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ
Taa, anyị na-emeghe ite icheta. ¿Onye na-enweghị igwe kwụ otu ebe dị ka nwatakịrị nwere mgbịrịgba dị ka nke a?.
Echere m na nke ahụ niile a kpochapụwo nke oge a na-arụzi ụgbọala, ejejej.
Ọrụ ya dị oke mfe.